Uvuko—Ngaba Likho Ithemba Ngabafi?
Ithemba Ngabafi—Yintoni Enokukwenza Uqiniseke Ngalo?
UYehova Undinike Okungaphezu Koko Bekundifanele
Ngaba banokuphinda baphile kwakhona?
IMPENDULO YEBHAYIBHILE: “Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi lakhe [uYesu] baze baphume.”—Yohane 5:28, 29.
Ngaloo mazwi uYesu wachaza ukuba xa kulawula uBukumkani bakhe, amaNgcwaba aya kuqongqothwa. UFernando, ekuthethwe ngaye kwinqaku elingaphambi kweli uthi: “Ndabamb’ ongezantsi emva kokufunda uYohane 5:28, 29. Wandenza ndanethemba, ndaza ndajonga phambili kwikamva.”
Mandulo, uYobhi owayeyindoda ethembekileyo wayelindele ukuba uThixo uza kumvusa xa efile. UYobhi wabuza: “Ukuba indoda eyomeleleyo iyafa ngaba inokuphila kwakhona?” Eqinisekile, waphendula wathi: “Ngayo yonke imihla yam yomsebenzi osisinyanzelo [ixesha laxa eseNgcwabeni] ndiya kulinda, kude kufike ukukhululeka kwam. Uya kubiza, ndisabele.”—Yobhi 14:14, 15.
Ukuvuswa kukaLazaro kusinika ithemba ngekamva
UMarta, udade boLazaro wayengaqali ukuva ngovuko. Emva kokufa kukaLazaro, uYesu wathi kuye: “Umntakwenu uza kuvuka.” UMarta waphendula wathi: “Ndiyazi ukuba uza kuvuka eluvukweni ngomhla wokugqibela.” Emva koko uYesu wathi kuye: “Ndim uvuko nobomi. Lowo ubonisa ukholo kum, nokuba uyafa, uya kubuyela ebomini.” (Yohane 11:23-25) UYesu wamvusa ngoko nangoko uLazaro! Eli bali lisithela thsuphe nje kwizinto ezinkulu eziza kwenzeka kwikamva. Khawube nombono nje, emhlabeni wonke kuvuswa abantu!
Ngaba bakho abaza kuvuselwa ezulwini?
IMPENDULO YEBHAYIBHILE: ILizwi likaThixo lisichazela ukuba uYesu wavuswa ngendlela eyahlukileyo kwabo basibhozo kuthethwa ngabo eBhayibhileni. Bona bavuselwa apha emhlabeni. Kodwa siva oku ngokuvuswa kukaYesu: ‘UYesu Kristu ungasekunene kukaThixo, kuba wemka waya ezulwini.’ (1 Petros 3:21, 22) Ngaba yayiza kuba nguye yedwa ovuselwa ezulwini? UYesu wakhe wathi kubapostile bakhe: “Ukuba ndiyemka ndize ndinilungiselele indawo, ndiya kuza kwakhona ndize ndinamkelele kum ekhaya, ukuze apho ndikhoyo mna nibe lapho nani.”—Yohane 14:3.
UKristu waya ezulwini waza walungiselela ukufika kwabanye abafundi bakhe. Ekugqibeleni abo bavuselwa ezulwini baya kuba yi-144 000. (ISityhilelo 14:1, 3) Kodwa, bayokwenza ntoni ezulwini?
Baza kube bexakeke gqitha! IZibhalo zithi: “Unoyolo yaye ungcwele lowo unesabelo kuvuko lokuqala; ukufa kwesibini akunagunya kubo, kodwa baya kuba ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, balawule njengookumkani kunye naye iminyaka eliwaka.” (ISityhilelo 20:6) Abo bavuselwe ezulwini baza kulawula umhlaba njengookumkani nababingeleli bekunye noKristu.
Ngoobani abaya kuvuswa kamva?
IMPENDULO YEBHAYIBHILE: KwiZibhalo eziphefumlelweyo kukho la mazwi athethwa ngumpostile uPawulos: “Ndinethemba kuThixo, themba elo abanalo naba bantu ngokwabo, lokuba kuza kubakho uvuko lwamalungisa nabangengomalungisa.”—IZenzo 24:15.
ILizwi likaThixo lisiqinisekisa ukuba iibhiliyoni zabo baye bafa ziya kuphila kwakhona
Ngoobani abakwiqela uPawulos awathi ‘ngamalungisa’? Khawucinge nje ngalo mzekelo. Ngaphambi kokuba afe, uDaniyeli othembekileyo wachazelwa ukuba: “Uya kuphumla, kodwa uya kubuya uvuke, wamkele isabelo selifa lakho ekupheleni kwemihla.” (Daniyeli 12:13) Uza kuvuselwa phi uDaniyeli? “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.” (INdumiso 37:29) UYesu waphinda wathi: “Banoyolo abo banomoya wobulali, kuba baya kuwudla ilifa umhlaba.” (Mateyu 5:5) UDaniyeli namanye amadoda namabhinqa athembekileyo baya kuvuselwa apha emhlabeni kwakhona ukuze bahlale kuwo ngonaphakade.
Ngoobani abakwiqela uPawulos awathi ‘ngabangengomalungisa’? Ziibhiliyoni zabantu eziye zafa zingazange zive kwaukuva ngenyaniso eseBhayibhileni. Emva kokuvuswa kwazo, ziza kumazi zize zimxabise uYehova * noYesu. (Yohane 17:3) Bonke abo baya kukhetha ukukhonza uThixo baya kufumana ithuba lokuphila ngonaphakade njengoYehova.
Bonke abo baya kukhetha ukukhonza uThixo baya kufumana ithuba lokuphila ngaphandle kwezigulo ibe bonwabile
Kuza kube kunjani emhlabeni?
IMPENDULO YEBHAYIBHILE: UThixo “uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona.” (ISityhilelo 21:4) “Baya kwakha izindlu baze bahlale; batyale izidiliya baze badle isiqhamo sazo.”—Isaya 65:21.
Khawuzibone uphila kwelo xesha nabantu bakho obathandayo abavusiweyo! Kodwa ke nanku umbuzo, Unokuqiniseka njani ukuba nyhani abantu baza kuvuswa?
^ isiqe. 15 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhileni.